Virtual & Mbeu dzakauchikwa Zviitiko Platform Yekukura | Inokurumidza
Kukura Kwekuwedzera Sisitimu
Seminari & Kudzidziswa
Tiketi & Kunyoresa
Yakabatanidzwa Kurarama Kuratidzira
Login Edza pasina Bhuka demo
Edza pasina Bhuka demo
Virtual & chemasanganiswa zviitiko chikuva icho inotyaira kukura.
Inokurumidza ndeye yese-mu-imwe zviitiko chikuva iyo inokupa iwe simba kuti uwedzere kusvika kwako, kubatanidza vateereri vako, kugadzira inogara yakasvibira nharaunda, uye kutyaira kwakasimba kwesangano kukura.
# 1 Zviitiko Platform ye Kukura Kuwedzera
Chiitiko chega chega chinouya neakasarudzika seti yematambudziko uye zvinangwa. Isu takanyatsogadzira chikuva chedu kubatsira zvikwata zvezviitiko zvinomhanyisa zvinangwa zvekukura kwavo zvichidzikisa zvinetswa zvinowanzoenderana necheni tekinoroji Wedzera kusvika kwako, bata varipo, gadzira vatungamiriri vanokodzera, ita kuti vatsigiri vako vafare, uye wedzera mari yako neAccelevents.
Wona yedu Yekukura Yekuwedzera Sisitimu
Expo Horo & Vanotsigira
Wedzera kugona kwako uye hunyanzvi kuchikuva chisina miganho.
Dhizaina inomira-kunze kwedhijitari yechiitiko nharaunda yako uye isina kodhi.
Tengesa matikiti, kunyoresa varipo, uye kugovera vateereri vako mukati memaminitsi.
Boka uye 1: 1 Networking
Kurudzira pfungwa yenzanga muchiitiko ichi kuti ugadzire kubatana kwenguva refu.
Wedzera mari yako nekuendesa kukosha uye kuyerwa kukosha kune varatidziri nevatsigiri.
Kurudzira vateereri vako kuti vaite zviito chaizvo zvinozovapa mubairo wekuita kwavo.
Pakarepo pinda iyo yazvino chiitiko data kuti unzwisise zvirinani kuita kwako.
White Label Zvakaitika
Vhura yakazara yakamisikidzwa chiitiko chiitiko senge iyo yako tekinoroji.
Gadzirira chiitiko chakachengeteka, uye chakateerana nematanho epasi rose.
Simba kumusoro nekubatanidza neako tekinoroji stack uye gadzirisa iyo yese faneli.
kasitoma tsigira iri muDNA medu
24/7 Rutsigiro rwechokwadi kubva kuVanhu Chaivo
Yedu yakazvipira yekutsigira timu inogara iine musana wako, zvisinei zuva kana nguva (hapana bots pano!).
Yakadzama Ruzivo Base uye FAQs
Svika kuunganidzwa kwedu kwezvigadzirwa zvinyorwa kuti utsigire chiitiko chako kusimudzira nhanho dzese dzenzira.
Maindasitiri Insights, Anobatsira zviwanikwa, uye Chigadzirwa Zvidzoreso
Dzidza maitiro ekugadzira zviitiko zvinoshamisa zvinokanganisa vateereri vako uye uwane mhedzisiro inogona kuyerwa.
pamusoro 12,500 makambani nemasangano vanovimba Vanokurumidza nezviitiko zvavo.
Vatengi vedu vataura…
Iyo yakazara pasuru iri nyore kushandisa uye setup. Kugara uchivandudzwa. Tsigiro yaishamisa!
Asiri-purofiti Sangano Management
Yakanyanya nyore kushandisa, inokurumidza uye yakapusa kudzidza, inoshamisa sevhisi, vashandi vane ruzivo kwazvo vakapindura mibvunzo yangu yese nekukurumidza, uye mutengo wakakura.
Brain Kukuvadza Kubatana kweNorth Kentucky
Iwo maficha epuratifomu ari nyore kumisikidza, kugadzira mune fomati, uye inobvumira nyore kushandiswa nevanopinda.
Iko Expo Chiitiko maficha aive akakwana kumusangano wedu weprojekiti yemudzidzi. Tsigiro yaive yakatanhamara zvese zvisati zvaitika uye panguva yechiitiko.
Inomhanyisa maficha anonzwisisika uye ari nyore kushandisa. Basa revatengi rinotyisa uye rinoita kuti ruzivo rwacho ruve nani!
Texas Association yeChikoro Mabhodhi
Iyo yekukurumidza rutsigiro mhinduro yakanaka! Zvakare, isu tinoda maitiro ekugadzirisa chikuva. Iko kuenderera kusimudzira zvakare kukuru nekuti isu tinonzwa kunzwikwa mukupa mhinduro.
Get yenyu dzidza on
Verenga edu ekupedzisira nzwisiso pane zviitiko, tekinoroji, kukura kwebasa uye nezvimwe.
8 Chiitiko Budgeting Matipi Ese Chiitiko Mugadziri Anofanirwa Kuziva
16 Zvikonzero Nei Uchifanira Sarudza Yese-mu-imwe Chiitiko Platifomu
Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezve Maitiro Ekugadzira Iyo Inobudirira Pamusangano Wepamhepo
7 Zvikonzero Nei Virtual Zviitiko Zviri Zvakakosha Kushambadzira Turu
Zvekupedzisira Zvimiro Zvaunoda muInternet Chiitiko Kuronga Platform
Wepamusoro 5 Zvinhu Zvaunofanirwa Kufunga Kuti Uchengete Yako Hybrid Chiitiko Chengeteke
6 Akanakisa Zviitiko Ekushambadzira Maitiro Ekusimudzira Yako Hybrid Chiitiko Zviitiko
Wepamusoro 6 Zvinhu Zvokufunga nezvazvo Kana Uchigadzirira Sustainable Virtual kana Hybrid Musangano
Zvekufunga nezvazvo Paunenge Uchisarudza Iyo Yemahara Chiitiko Nzvimbo
Maitiro Ekutarisira Ekuenda Kune Vanotarisira Around Virtual Zviitiko
Nzira gumi nembiri dzekuvaka Revenue ine Chiitiko cheHybrid
Kutungamira Kutora Kwezvakaitika Uye Zviitiko zveHybrid
Events dziri kuchinja. Usatombopotsa kurohwa.
Nyorera tsamba yedu kuti ugamuchire edu matsva nhau, mazano, matekiniki, mazano, zvigadzirwa zvechigadzirwa uye zvimwe.
Copyright 2021 Inokurumidza